अमेरिकाले मध्यपूर्व पठायो एफ–२२ फाइटर विमान, इरानले अब के गर्छ ? « Khabarhub
अमेरिकाले मध्यपूर्व पठायो एफ–२२ फाइटर विमान, इरानले अब के गर्छ ?
एजेन्सी– इरानसँगको तनाव कायम रहेका बेला अमेरिकाले आफ्नो एफ–२२ विमान मध्यपूर्व पठाएको छ । अमेरिकाको एयरफोर्सले एफ–२२ फाइटर विमान कतार पठाइएको हो । हर्मुजको स्ट्रेटमा इरानी फौजले अमेरिकी जासुसी सैनिक ड्रोन खसालेपछि मध्यपूर्वमा तनाव उत्कर्षमा छ ।
अमेरिकाको एयर फोर्सले कतिओटा एफ–२२ विमान कतार पठाइएको भन्ने विषयमा भने कुनै जानकारी दिएको छैन । सार्वजनिक भएको एक तस्वीरले भने कम्तिमा पाँचओटा विमान कतार पुगेको आशंका गरिएको छ ।
एयरफोर्सका अनुसार अमेरिकी फोर्सको रक्षा तथा यो क्षेत्रमा अमेरिकाको दायित्व पूरा गर्नको लागि पहिलोपटक उक्त फाइटर विमान कतार पठाइएको हो ।
इरानले अमेरिकाको सैन्य ड्रोन खसालेको अमेरिकाले एयर फोर्स विमान मध्यपूर्व पठाएको हो । इरानले उक्त ड्रोन इरानको आकाशमा रहेको बताउँदै आएको छ । अमेरिकाले भने उक्त ड्रोन अन्तर्राष्ट्रिय समुद्रमा रहेको बताएको छ ।
विश्लेषकका अनुसार इरानको मिसाइल सुरक्षा प्रणालीलाई लक्षित गरी कतारमा उक्त फाइटर विमान अमेरिकाले पठाएको हुनसक्ने बताएका छन् ।
कतारमा अमेरिकी फाइटर विमान पठाउने निर्णयले आगामी दिनमा इरान र अमेरिका थप द्वन्द्वको अवस्था आउनसक्ने बताइएको छ । इरानले अमेरिकी ड्रोन खसालेसँगै अमेरिकाले २ हजार सैनिक मध्यपूर्वमा पठाइसकेको छ ।
प्रकाशित मिति : १६ असार २०७६, सोमबार ७ : २६ बजे